Maxaa ku xiga Suudaan iscasilaadii PM Hamdok ka dib?
Home Warar-ka Dunida Maxaa ku xiga Suudaan iscasilaadii PM Hamdok ka dib?
Gelinkii dambe ee Axadii, Abdalla Hamdok ayaa kasoo muuqday telefishinka dowladda si uu ugu dhawaaqo inuu iska casilayo xilka ra’iisul wasaaraha Suudaan.
Ku dhawaaqista ayaa timid lix toddobaad uun ka dib markii hogaamiyaha rayidka ah ee ay reer galbeedku taageeraan uu dib ugu soo laabtay jagada ka dib afgambigii iyo xabsi guri oo lagu afgambiyay millatari 25-kii October – balse ma aysan noqon wax la yaab leh.
Warar soo xiganaya ilo ku dhow Hamdok ayaa sheegaya in uu qaati ka taagan yahay go’aanka Abdel Fattah al-Burhan – oo ah taliyaha ugu sareeya ee militariga iyo hogaamiyihii afgambiga – ee lagu soo celinayo sirdoonkii cabsida badan laga qabay, iyo sidoo kale diidmadii uu u diiday ra’iisal wasaaraha. inuu si xor ah u magacaabo xubnaha golihiisa wasiirada.
Hamdok ayaa kaliya dib loogu soo celiyay qayb ka mid ah heshiis muran dhaliyay oo uu al-Burhan qalinka ku duugay bishii Nofembar kaas oo sidoo kale sheegay in doorashooyin la qaban doono July 2023. Laakiin halka hogaamiyayaasha reer galbeedka ee riixaya soo celinta Hamdok ay si degdeg ah u soo dhaweeyeen dib u soo celinta, dhaqdhaqaaqa dimoqraadiyadda ee baahsan. soo laabashadiisa waxay u arkaysay “caleen berde ah” oo xalaalaysay afgambiga, hubisayna awoodda milatariga.
Previous articleGuddoomiyaha Maamulka Dhuusamareeb oo faah faahiyay khasaaraha dagaalkii dhacay.
Next articleWaxaa Maanta Maalintii Afaaraad Galay Shirka Golaha Wadatashiga Qaran Oo Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Ka Socda